Kyaw Nyo Thway: ဘီယာကို ဘာကြောင့် ဖန်ခွက်နဲ့ထည့်ပြီး သောက်သင့်တာလဲ?
ဒီခေတ်မှာတော့ ဘီယာဟာ သတ္တုဘူး (သို့) ပုလင်းနဲ့ ရောင်းချတဲ့ ဘီယာရှိသလို ၊ စည်ထဲကနေ ခွက်ခြင်နဲ့ရောင်းတဲ့ ဘီယာလည်း ရှိပါတယ်။ ဆိုင်မှာ ခွက်နဲ့ဝယ်သောက်တဲ့အခါ ဖန်ခွက်နဲ့ ထည့်ပေးပေမယ့် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စတိုးဆိုင်ကနေ ဝယ်ရင်တော့ သတ္တုဘူး(သို့) ပုလင်းနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေ ဘီယာကိုသောက်တဲ့ အခါ ဖန်ခွက်နဲ့ ထည့်ပြီး သောက်ဖို့ အတွက် လေ့လာသူတစ်ချို့က အကြံပေးထားတာရှိပါတယ်။
ဘီယာကို ဘာကြောင့်ဖန်ခွက်နဲ့ထည့်ပြီး သောက်သင့်သလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်း (၃) ချက်ရှိနေပါတယ်။
- အနံ့ နဲ့ အရသာ ကို ကောင်းစွာခံစားနိုင်ဖို့
- အမြင်ကြောင့်သောက်ချင်စိတ်ဖြစ်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေဖို့။
[အနံ့ နဲ့ အရသာ ကို ကောင်းစွာခံစားနိုင်ဖို့]
Taste ဆိုတဲ့အရသာကိုခံစားမှုဟာ အနံပါဝင်မှပဲ ပြီးပြည့်စုံမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အစားအသောက်တွေကို အရသာခံတဲ့အခါ နှာခေါင်းသာပိတ်နေမယ်ဆိုရင် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အရသာခံစားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အနံ့ဟာအရသာနဲ့တွဲလျက်ရှိနေပါတယ်။ ဘီယာကို ဖန်ခွက်နဲ့ထည့်ပြီးသောက်ခြင်းအားဖြင့် ဘီယာရဲ့အရသာနဲ့အတူ ဘီယာအနံ့ကိုလည်း ခံစားနိုင်တာကြောင့် ကောင်းမွန်တဲ့ဘီယာရဲ့ အရသာကိုပြည့်စုံစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ မျက်လုံးနဲ့သောက်တယ်လို့ တောင် တင်စားပြီးပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ဖန်ခွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ဘီယာရဲ့အရောင်အသွေးကလည်း စိတ်ကိုပိုလို့ တပ်မက်မှုဖြစ်စေပါတယ်။ စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ မတ်ခွက်တစ်ခွက်ထဲကို ထည့်ထားတဲ့ ဘီယာရယ် ၊ ပုလင်းတစ်လုံးထဲက ဘီယာရယ် ၊ ဖန်ခွက်အကြည်ထဲမှာ ဝင်းဝင်းပပရှိနေတဲ့ ဘီယာတွေရယ်၊ သုံးခုယှဉ်ချပြီးသာ ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။
တချို့ကတော့ ပုလင်းထဲကဖြစ်စေ ၊ စည်ထဲကဘီယာကို ဂေါက်တံကနေ ထည့်တဲ့အခါဖြစ်စေ အမြုပ်မထအောင် ထည့်တတ်တာကို ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ရပ်အဖြစ် ဂုဏ်ယူချင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘီယာဟာ အမြုပ်ထမှ ဘီယာပီသပါတယ်။ ဘီယာကို ခွက်ထဲလောင်းထည့်လိုက်တဲ့အခါ ထလာတဲ့ အမြုပ်တွေဟာ သောက်ချင်မှုကို ဖြစ်စေတဲ့ တကယ့်အထောက်အပံ့ပါပဲ။ အမြုပ်ဟာ ဘယ်လိုစွမ်းဆောင်ပေးသလဲ? ဟုတ်ကဲ့၊ အမြုပ်ဟာ ရနံ့ကိုပိုပိုလှိုင်စေပါတယ်။ ဖန်ခွက်နဲ့သောက်ခြင်းကြောင့် ဘီယာအနံ့ကိုကောင်းစွာသိရှိခံစားနိုင်မှုကို အထောက်အပံ့ပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခွက်ထဲမှာ ဘီယာအမြုပ်ထနေတာကြောင့်လည်း အမြုပ်နဲ့အတူကြွတက်နေတဲ့ ဘီယာရဲ့အနံ့အမျိုးအစားကိုလည်း အလွယ်တကူနဲ့ သိရှိနိုင်ကာ၊ မတူကွဲပြားတဲ့ ဘီယာအနံ့တွေကိုလည်း ခွဲခြားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ခွက်ထဲမှာ အမြုပ်ထခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေပါပဲ။ အထက်မှာလည်း ဘီယာရဲ့အနံ့ဟာ သောက်ချင်စိတ်ဖြစ်မှုကို ပိုမိုလာစေတယ်လို့ ဆိုထားတယ်မဟုတ်ပါလား။ ဘီယာအမြုပ်ထခြင်းဟာ အနံ့ကိုပိုမိုရရှိစေတာကြောင့် သောက်သုံးတဲ့အခါ တကယ်ကို ကောင်းမွန်တဲ့ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမှာ အမှန်ပါပဲလေ။
Kyaw Nyo Thway: ဘီယာကို ဘာကြောင့် ဖန်ခွက်နဲ့ထည့်ပြီး သောက်သင့်တာလဲ? - ဘီယာကို ဘာကြောင့် ဖန်ခွက်နဲ့ထည့်ပြီး သောက်သင့်တာလဲ?
Tuesday, March 14, 2017 at 9:15 PM
Kontengaptek at November 26, 2018 at 6:54 AM
I was born in 23rd August, 1984 in New Delhi, India while my father was serving asaMilitary attached staff member. When I was9months old, my family moved back to Myanmar as my father’s responsibilities were completed. I passed matriculation exam from No.1 Basic Education High School at Hlaing Tharyar. And then, I studied Economics at Dagon University as distance learning. I graduated with B.A (Economics) in 2004- 2005. While I was waiting my exam result of matriculation, I had my very first job as general worker in the factory. Then while I was studying Economics at Dagon University, I worked asaTraining Guide at Computer Training Centre. After that I worked asaTraining Supervisor at an Education Centre. In 2007, I had started working asaSupervisor at Victoria Shopping Mall at my home town-Hlaing Tharyar. From 2011 to 2013, I worked asasenior reporter at Mobile Guide Journal-Myanmar’s First Mobile Phone News and Technology Journal. In 2014, I started working asafreelance copywriter for commercial writing, advertising text and articles about business or brands. Then, in 2015, I started working asacontent writer at Wave Digital Marketing Agency. I worked there for2years. After resigning from Wave Digital, I joined Blink Agency asaCopywriter and worked there for5months. While I was working asaSupervisor of Cyber Café at Victoria Shopping Mall, in 2007, I started blogging on the Blogger platform. I blogged poem, essay and articles there. Some of my poem was published in magazine while I was working at Mobile Guide Journal. My first poem titled as "ရည်းစားစကား" was published in October 2005 on Fashion Image Magazine with the Pen Name of "သွေး".I started using timeline and also made my official page to write post such modern poem, essay and articles since facebook was popular in Myanmar in around 2007. In 2008, I and some of my friends organized and hadaPoetry exhibition name “Starry Morning” at Da Gaung Gallery. I published my first book “ချောကလက်အက်ဆေး “in 2013. My other profession is script writing. I and two friends foundedascript writing group named RGB Script Syndicate and we started working for screen playing for some Myanmar commercial movies. My second book "သူ..ကျမကို" was published in Nov 2017 which is romance story. Currently, I amaSenior Copywriter at Revo Digital Marketing Agency and also working asafreelance Copywriter for businesses.
ဘီယာကို ဘာကြောင့် ဖန်ခွက်နဲ့ထည့်ပြီး သောက်သင့်တာလဲ...